[Saturday, June 10th, 17] :: Madaxweynaha Somaliland Oo Kulan Afur Ah La Qaatay Culimada Dalka Kuna Dhawaaqay Guddida Golaha Culimada
Hargeysa(RH)Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo, oo afur u sameeyey culimada dalka intooda badan, sidii caadada u ahayd sanad walba marka ay bisha ramadaan soo gasho uu madaxweynuhu kulan afur ah la yeesho culimada dalka oo isaga yimaada gobolada ay ka kooban tahay Jamhuuriyadda Somaliland.
Waxaan diyaar u ahay, in aan dhug iyo dhaymo u yeesho, dardaaranka iyo dareenka umaddayda, culimo iyo caamo intaba. Waxaa iga go'an in aan ummadayda uga tago, dhaxal wanaagsan iyo hab-dhaqan dawladeed, oo la is-toosin karo. Sidaa darteed, uma aqaan ceeb, in la saxo qaladaadka ka dhaca ama ku yimaadda maamulka dawladnimo.
Xukuumaddaydu waxay kor u qaaday xidhiidhka iyo xurmada culimada dalka, taasina waxay sababtay is-kaashi iyo wada-shaqayn weyn, oo lagaga soo gudbay duruufo badan; sida la-dagaalanka aragtiyaha xag-jirka ah, ee lagu duufsado da'yarta diinta barata. Dhinaca kale, waxa ka mid ah in ay culimadu si weyn uga qayb-qaadatay gurmadka iyo gargaarka qaran, ee loo fidinayo dadka abaaruhu aafeeyeen.
In la sii wado is-kaashiga noocan ah, waa mid aan kula dardaarmi doono, culimada iyo cidda iga dambaysa, ee aan mas'uuliyadda dalka iyo dadka ku wareejin doono. Aniga oo tixgelinaya, codsigii aad culimo ahaan ii soo jeediseen, ee ku saabsanaa samaynta guddida culimada ee dastuurka ku xusan, waxaan u magacaabay laba xubnood oo ka tirsan Golaha Xukuumadda iyo laba xubnood oo ka tirsan Golaha Guurtida, si ay u soo xulaan, una soo magacaabaan xubnaha Guddida Culimada Qaranka, isla markaana u gudbiyaan Golaha Guurtida, si ay u ansixiyaan. Farxad weyn bay ii tahay, in hawshaa la dhammaystiray muddadii aan xilka qarankan hayey.
1.	Sheekh Cabdilaahi Cali Boqore Jawhar
2.	Sheekh Maxamuud Suufi Muxumed
3.	Sheekh Maxamed Cumar Dirir
4.	Sheekh Dr Axmed Jaamac Ismaaciil
5.	Sheekh Dr Cabdirashiid Sheekh Saalax
6.	Sheekh Dr Xasan Sheekh Cali Warsame
7.	Sheekh Dr Cumar Yuusuf Axmed
8.	Sheekh Cabdilaahi Xasan Xaashi Barbarawi
9.	Sheekh Cabdikariim Xasan Xoosh
10.	Sheekh Maxamed Cali Jaamac (Gadhle)
11.	Sheekh Cabdiraxmaan Aw Axmed Cabdi
12.	Sheekh Maxamed Xasan Yuusuf (Agaasimaha guud ee guddida)